प्रचण्डका यि खास मान्छेले खुशीले फुरुगं हुँदै भने ‘अहिले हाम्रो नेता नै केपी ओली’ – Etajakhabar
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेको एक साता वितिसकेको छ । तर गठबन्धनको मुुख्य घटक माओवादी सरकारमा संलग्न् भएको छैन । पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद र एमालेसँगको पदीय भगबन्डाको अन्तिम छिनोफानो नभएकाले सरकार विस्तारमा विलम्ब भईरहेको हो ।
यसै सन्दर्भमा सरकार विस्तार र पार्टी एकतासम्बन्धी दुवै काममा उत्तिकै सक्रिय भुमिका निर्वाह गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुनसँग कान्तिपुरका लागि दुर्गा खनालले शनिबार गरेको कुराकानीको केहि अंश :
पार्टी एकतामा नेता कार्याकर्ताको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? हामी करिव ५० बर्ष अलगअलग स्कुलिङमा हुर्किएका पार्टी हौँ । त्यैले संयम र धैर्यतासाथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । दुवै पार्टीमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । कसले के छोड्यो हिलो तर हामी सबैले अहिले नेतृत्वलाई शंकाको लाभ दिऔं । एकता हुँदा कोही घटुवा हुने वा कोही बढुवा हुने भन्ने होईन, यसबाट बेखुसी पनि हुनुपर्दैन । सबै वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सबैलाई उचित कार्यविभाजन र सम्मानित हुने अवस्था सिर्जना गर्छौँ । यसले सबै तहका नेताहरुले ईतिहास लिएको यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुने कोसिस गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
पार्टी एकता कहिलेसम्म भईसक्छ ? दुई कार्यदलले १५ दिनको समय पाएका छन् । अव तया अवधिभित्रै हामी हाम्रो प्रतिवेदन र सुझाव तयार गर्छौ । अनि नेतृत्वमा छलफल गरेपछि चैतको पहिलो साता एकतामा पुगौँला । सुरुमा केन्द्र, त्युसपछि प्रदेश, जिल्ला र पेसागत संगठनको एकीकरण गर्ने विधि हुन्छ ।
पालिहे गठबन्धन बनाउँदा सरकार बन्छ, अनि पार्टी एकता हुन्छ भन्ने कल्पना थियो । तर निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिएपछि हामी एकता प्रक्रियामा केही आरोह अवरोह देखियो । अनि त्यही बीचमा सरकार बनाईहाल्नुपर्ने भयो । त्यसैले दुवै दलबीच सबै विषयमा कुरा टुंगिसकेको थिएन । अव मन्त्रालय बाँडफाँट करिब भईसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा अब सरकार विस्तार भईहालछ । माओवादी तयार अवस्थामा छ ।
माओवादीले पठाउने मन्त्रीको नाम तय गरिसक्यो त ? मोटामोटी तयार भएको छ । नेतृत्वमा तहमा पठाईने साथीहरुको नामको ‘रोस्टर’ तयार छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण १३, २०७४ समय: ८:३६:४१